OTRIKAFO : “Tsy azo antenaina intsony ny fitondrana Hery Vaovao ho an’i Madagasikara”
Naneho ny heviny mikasika ny kabary nataon’ny Filohan’ny Repoblika ihany koa ny antoko Otrikafo. 11 janvier 2017
Ho an’ity antoko ity, dia mazava ny foto-kevitra ijoroany fa tsy matoky izao fitondrana HVM izao intsony ry zareo, efa hatramin’io fitondrana io tany am-boalohany, noho ny tsy fahaizana mitantana. Kabary efa tsara petraka, kabary fanomanana amin’ny fifidianana, kabary fanilihana andraikitra any amin’ny hafa iny lahateny nataon’ny Filoha iny, hoy Rajaonah Andrianjaka.
Amin’ny antoko otrikafo dia tsy misy azo raisina ny kabary izay natao teny Iavoloha fa fanadiovan-tena no betsaka. Maro ny zavatra tsy nety nandritra ny fitantanana ny firenena nandritra ny telo taona, tsy nisy zavatra vanona, na niantefa tamin’ny vahoaka ny fampandrosoana nodradra-dradraina hatramin’izay, kanefa dia nihalatsaka an-katerena ny vahoaka madinika ary vao mainka aza niha nahantra.
Tsy itondra fampandrosoana amin’ity taona ity, ny fitondrana HVM, fa fanomanana ny fifidianana amin’ny taona 2018 no imasoan’izy ireo manomboka izao, hoy ny fanehoan-kevitry ny antoko otrikafo hatrany. Nambaran-dRajaonah Andrianjaka hatrany fa mbola hihasahirana sy hahantra hatrany ny vahoaka amin’ity taona ity.
Jereo ny fiakaran’ny vidin-tsolika, hiakatra ihany koa ny vidim-bary, ny sara-dalana, sns, nefa ity fanjakana ity tsy mahita vahaolana hialana amin’ny fahantran’ny Malagasy.